Strawberries n'ụlọ, ihe nzuzo nke ezigbo owuwe ihe ubi - Nlekọta Strawberry - 2019
Kedu ka esi eto strawberries na ulo
Ndị hụrụ strawberries dị ụtọ ga-eji obi ụtọ rie ha n'afọ nile, ma oge owuwe ihe ubi abụghị nnukwu. N'ụzọ dị mma, ịmalite mkpụrụ osisi strawberries kwa afọ nwere ike ime n'ụlọ. Ọ dị mkpa iji aka gị mara banyere nuances nke ugbo ugbo na aro banyere otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi, iji nweta mkpụrụ osisi strawberry ọbụna n'oge oyi.
Ị ma? Na oge Soviet, e mepụtara nkà na ụzụ nke strawberries na-eto eto n'afọ nile, nke, n'ihi ọnọdụ ụfọdụ, agbasaghị n'ógbè agrarian nke mba ahụ n'oge ahụ.
Ihe kwesịrị ịbụ ala, oke nke ikike maka seedlings
Ịmepụta microclimate maka strawberries
Olee otú ị ga - esi merie strawberries n'onwe gị
Ihe nzuzo nke na-eto eto strawberries n'ụlọ
Olee otú ịhọrọ seedlings maka na-eto eto strawberries
Iji na-eto eto strawberries n'ụlọ, ịkwesịrị ịhọrọ seedlings kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike itolite n'onwe gị site na osisi, ma ọrụ a tara akpụ nwere ike ịbụ karịa ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Tụkwasị na nke ahụ, iji seedlings eme ka ị nwee ike iwe ngwa ngwa.
N'ihi na ị na-eto eto na-ewu ewu mkpụrụ osisi strawberry, nke na-amị mkpụrụ na oyi. Ụfọdụ n'ime ụdị ya na-amị mkpụrụ maka ọnwa 10 n'afọ, ma ọ bụghị kwa dabere na ogologo oge na ọnọdụ ihu igwe. N'etiti iche iche nke oge na-adịghị asọ oyi, anyị nwere ike ịmata ihe ndị a: Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II, Tristar, Byron, Roman F1 na ihe ndị ọzọ, ma kpọmkwem Queen Elizabeth II bụ mkpụrụ kasị amị mkpụrụ ma na-enye nnukwu mkpụrụ.
Ngwongwo dị mma iji na-echekwa ụlọ ahịa pụrụ iche, ọ bụghị n'ahịa site n'aka ndị mmadụ. Ụlọ ahịa na-echekwa ihe ha chọrọ ịzụta.
N'ịbụ onye natara azịza ziri ezi maka ajụjụ ma ọ ga-ekwe omume na-eto eto strawberries n'oge oyi, ọ bara uru ịmatakwu banyere ihe isi ike nke ịhazi ubi ubi na ihe ndị a chọrọ maka ya, nakwa banyere atụmatụ nke seedlings.
Ịhọrọ akpa maka seedlings abụghị ihe siri ike: ite na drawer ga-eme. Ọ bụrụ na enweghi ebe ị ga-etinye ihe ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta polyethylene cylinder maka strawberries site na ihe nkiri dị egwu nke kwesịrị ekwesị maka griin ha. A na-etinye ihe ndị a n'elu ala ma ọ bụ kwụwasị. Na-ejuputa ala ha, i kwesiri ime mkpuru maka seedlings n'ime ihe odide a na-eleba anya: nke obula n'ime nseta nke 20-25 cm.
Ọ dị mkpa! Na tankị maka ịmalite na-eto eto strawberries chọrọ oghere maka mmiri na-eru. Na ala ịkwesịrị ịdọrọ akwa drainage, nke ị nwere ike iji pebbles, ụrọ gbasaa, brik bụrụ.
Ala maka strawberries na ụlọ kwesịrị inwe ihe ziri ezi, nke ga-eme ka mkpụrụ. Ọ ga-agụnye ngwakọta nke peat, fatịlaịza na ala. Ị nwere ike iji aka gị mee mkpụrụ dị otú ahụ site na ịzụta ihe niile dị iche iche.
Superphosphate nwere ike ji mee ihe dị ka amanyere bụ iwu nke ịnweta fatịlaịza.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na gị onwe gị na-eme mkpụrụ maka ịmalite na-eto eto strawberries n'ụlọ ma maka nke a, ị na-ekpokọta ala n'ogige ahụ, ṅaa ntị n'ihe na-eto na ya. Ala nke osisi strawberries, poteto, tomato ma ọ bụ raspberries na-eto eto anaghị adabara, n'ihi na ha nwere ike ịnwe spores nke ọrịa ụfọdụ maka osisi ndị a nwere ike gbasaa na-eto eto. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ala, na-ezu ike afọ atọ.
Maka ịkụ mkpụrụ nke strawberries kwa afọ ka achọrọ iji nye ọnọdụ dị mma. Ọ bụ ezie na osisi strawberries na-eto na ọnọdụ obibi ọkụ, ọ bụghị nke a niile bụ nlekọta oyi.
Ezi owuwe ihe ubi nke strawberries chọrọ ihe okike nke karịsịa microclimate. Ihe dị mma bụ okpomọkụ ikuku nke 20-25 Celsius C. Iru mmiri kwesịrị ịdị elu - 80%. Dị ka o kwesịrị ịdị, n'ọnọdụ dị otú ahụ, ezigbo ventilashị dị mkpa.
Igwe ọkụ dị ezigbo mkpa maka usoro nke photosynthesis. E nwere ike iji oriọna na-egbuke egbuke na reflector. A na-atụ aro ka ịtọ awa elekere iri na isii. Ejikere nke ọma kere microclimate ga-enyere ndị strawberries aka ịzụlite nke ọma na, n'ihi ya, na-amị mkpụrụ ọma.
Mgbe ị kwadebere ọnọdụ maka ịmalite strawberries ịmụrụ ụra n'oge. Ọ dị mkpa icheta ihe dị mkpa dị mkpa nke mmepe nke osisi okooko dị ka pollination. N'ụlọ, lee, ọ pụghị ime na nke a. Ya mere, ọ dị mkpa iji nweta pollination nke peduncles n'oge izu ole na ole mgbe bushesberry bushes na-agba.
Dust strawberries onwe ha na ụzọ abụọ:
na ụtụtụ na ntụziaka nke peduncles kpọmkwem na-agụnye ofufe. Ifufe si na ya ga - enyere pollinate strawberries n'otu ụzọ ahụ ka ọ na - eme na ala oghe;
jiri aka na-emetọ ifuru ọ bụla na ahịhịa agba. Ọkụ dị mkpa maka ịkwọ ụgbọala kwa ụbọchị kwa ụbọchị.
Na obere ụlọ obibi pollination agaghị eme ka ihe isi ike. Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ọtụtụ ihe ọkụkụ, ụzọ ndị dị otú ahụ nke mmetọ pollution nke strawberries ga-abụ oge na-ewe ma na-adịghị mma.
Strawberry bụ osisi na-achọsi ike ka ọ na-eto ya n'ụlọ, ọ dị gị mkpa inwe ndidi. Iji na-eto strawberries na windowsill n'oge oyi, anyị na-enye ndụmọdụ ndị a:
A ga-ewepụ ya na peduncles mbụ. A na-eme nke a ka seedlings wee nwee mgbọrọgwụ ngwa ngwa. Mgbe odidi nke oke akwukwo di iche iche, apuru ime ka ogwe osisi okooko osisi ahu puta;
A pụrụ iji ogige na-atụgharị ogige iji hazie bushesberry bushes. Nke a na-enye aka na ngwa ngwa nke ovaries;
A ghaghị ịghasa mkpụrụ osisi Strawberry oge ụfọdụ na biohumus na organic nri. N'okwu a, ọ dị mkpa ịmara ọnụọgụ ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị gafee ya, owuwe ihe ubi ahụ ga-abụ obere, na akwụkwọ ahụ dị ukwuu;
A na-ehichapụ mbọ ndị dị nro n'ime ala n'okpuru seedlings ka ha wee tinye ions ígwè n'ala n'oge usoro ọgwụgwọ. Cheta na maka ezi mmepe osisi ahụ chọrọ fatịlaịza nwere ígwè.
Ịgbara na ọkụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa. Njikwa ziri ezi nke ihe ndị a ga-eme ka mkpụrụ osisi strawberry zụlite ma sie ike. Ịmebe iwu niile a dị n'elu ga-eme ka ohere nke ịmịkọrọ ihe ọkụkụ na-eto eto n'ụlọ ma nweta nnukwu owuwe ihe ubi.
Ị ma? N'ebe obibi, owuwe ihe ubi strawberry nwere ike ichere ihe dị ka ụbọchị 60 site na oge ịkụ mkpụrụ.
Gịnị kpatara begonias curl leaves na ihe m kwesịrị ime?
Yucca: iji, ọgwụ ọgwụ na contraindications
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu ka esi eto strawberries na ulo